Imba > Zvigadzirwa > Laser muchina
Zvigadzirwa zvemagetsi, zvigadzirwa zvemidziyo, zvigadzirwa zvemagetsi, zvigadzirwa zvevatengi, sensors, auto zvikamu, 3C zvemagetsi, zvigadzirwa zvemaoko, chaiyo michina, zvipo uye zvishongo, zvekurapa zvigadzirwa, yakakwira uye yakaderera magetsi magetsi emagetsi, indasitiri yekugezera, bhatiri indasitiri, IT indasitiri nezvimwe minda.
Yakazara otomatiki laser yekumaka muchina Yakashongedzerwa neepamusoro-soro Optical fiber, girini mwenje, UV laser yekumaka system, inogona kunyatso uye nenzira kwayo kupedzisa chero boka rekumaka mabasa, neakajeka uye akanaka kunyora.
Tenga rakanakisa remhando yepamusoro Laser muchina kubva kuShenzhen Simida izvozvi. Wepamusoro mhando Laser muchina, ​​sarudzo huru uye kuraira kwehunyanzvi hunhu hwedu, unogona kuva nechokwadi chekutenga iyo Laser muchina nefekitori yedu. Uye isu tinokupa iwe yakanakisa mushure-yekutengesa sevhisi uye inouya nenguva.